राईजिङ्ग खबर | प्रकाशित मिति : २०७३ मङ्सिर २८ मंगलबार | ०३:१९
- श्वेता सिन्हा
नीति निर्माणको तहमा हुने राजनीतिक सहभागितामा महिलाको उपस्थिती अर्थपूर्ण हुन्छ । किनकी त्यसले नै महिला अधिकार यकिन गर्दछ । लैङ्गिक समानताका लाागि महिला आर्थिक रुपमा मात्र होइन राजीतिक रुपमा पनि बलियो हुनु अनिवार्य छ । यसको लागि राजनीतिक दलभित्र पनि महिलाको उपस्थिती समानुपातिक ढंगले हुन जरुरी छ । तर ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई आफनो घोषणापत्रमा समावेश गरेका सबै राजनीतिक दलहरुले अहिलेसम्म आफ्नै पार्टी भित्र यो नीति लागु गरेका छैनन । अझै मधेस केन्द्रित दलहरुमा ३३ प्रतिशतको त कुरा छौडौ धेरै जसोमा पार्टीमा महिला पदाधिकारीको सहभागिता शुन्य नै छन ।
मधेस राजनितिमा महिलाको उपस्थिती अत्यन्त न्युन छ । २०६४ सालको मधेस आन्दोलन पश्चात मधेसी महिलाहरुमा आएको जागरण सँगै राजनितिमा पनि उपस्थिती तुलनात्मक रुपमा पहिले भन्दा बाक्लियो । यसअघि मधेसमा महिला माथिको भेदभाव र पुरुषवादी सोच हावी भएका कारण महिला घर बाट बाहिर पनि निस्कन पाउदैननथे । घरका हरेक निर्णयहरु पुरुषले गर्ने परम्परा थियो । महिलाले त्यो निर्णय खराब भैएपनि सहर्ष स्वीकार्नु वाध्यता थियो । ०६४ अघिका कैयन संसदिय निवार्चन र आन्दोलनमा मधेशका महिलालाई प्रयोग मात्रै गरियोे । उनीहरुको अर्थपूर्ण उपस्थितीलाई ईन्कार गरियो वा स्विकार गरिएन । त्यस्तो अभ्यासको क्रमभंगता अहिलेसम्म भएको छैन ।
विश्व इतिहास हेर्ने हो भने सन् १८७५ मा जर्मनीमा अगस्ट वेवेलले समाजवादी प्रजातान्त्रिक पार्टीले गरेको सम्मेलनमा महिलाहरूको समान मतको अधिकारका लागि राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । महिलाहरूले मतदान गर्नु पाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव पहिलो पटक जर्मनी महिला क्लारा जेट्किनले राखिन र त्यो प्रस्ताव पारित पनि भयो । क्लारा जेट्किन कै पहल कदमीमा १९२० मा कम्युनिस्ट महिला अन्तर्राष्ट्रिय गठन भएको थियो । सन् १९७९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले महिला विरूद्धको भेदभावको अन्त गर्ने सम्बन्धी घोषणापत्र पारित गरयो । नेपालले पनि त्यस घोषणापत्रलाई वि.स.२०४८ सालमा अनुमोदन गर्याे । तर महिला विरूद्धको भेदभावको अन्त गर्ने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र नेपालले अनुमोदन गरे पनि यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको छैन । अझै मधेसमा त अवस्था दयनीय नै छ ।
वि.स. ०६२÷०६३ मा भएको जनआन्दोलन , वि.सं. २०६४ मा भएको मधेस आन्दोलन र त्यसपछिको पहिलो सविंधान सभा चुनापछि मधेसी महिलाहरु आफनो हकअधिकार प्रति जागरुक मात्र भएनन् जिम्मेवारी लिन पनि सक्षम र सबल पनि भए । फलस्वरुप पहिलो सविधानसभामा १९७ महिलाले प्रतिनिधित्व गर्न पाए, जसमा ५४ जना मधेसी महिला थिए । त्यसैगरी दोस्रो संविधान सभामा १६२ महिला सहभागी भए र त्यसमध्ये मधेशी महिलाको संख्या ६५ छ । यति हुदाँ हुदै पनि मधेसी महिलाहरुले समावेशी र समतामुलक समाज निर्माणको नारा लगाई रहने मधेशवादी राजनितिक दलमा पाउनु पर्ने स्थान, मान सम्मान र भूमिका भने पाएनन । यदि कथम कसैले पाए भने नातावाद कृपावादका आधारमा, जो परालको खुट्टा टेकेर मात्रै उभिएका जस्ता देखिन्छन । क्षमता र योग्यता भन्दा पनि महिलालाई अवसर र भूमिका दिने सवालमा टिके प्रथाले नै निरन्तरता पाएको स्पष्ट देखिन्छ ।
मधेश राजनीतिमा महिलाको खडेरी सधै परीरह्यने । नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहको मृत्युपछि उनकी पत्नी आनन्दीदेवी सिंहलाई मधेसी दलका नेताले अपहरणको राजनीति गरे र आफ्नो शक्ती स्थापित गर्ने प्रयत्न गरे । मधेसी महिलामाथी मधेसी दलको नेताको दृष्टिकोण बुझने सन्र्दभमा आनन्दीदेवी अपहरणको ईतिहास सधै विझाउने खिलका रुपमा रहीरहनेछ । त्यसपछिका वर्षमा मधेसको राजनीतिक जागरणले मधेसको मुद्धालाई केन्द्रमा स्थापित गरेपनि मधेसी महिलाको सवलीकरणको सवालमा उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । त्यसका निम्ती को को दोषी छन, ईतिहासले समिक्षा गर्ने विषय हो ।
मधेश केन्द्रित दलहरुमा मधेसी महिलाको वर्तमान सहभागिता र भूमिका हेर्ने हो भने अझै पनि उनीहरु पुरुष अहंमबाट पिल्सिएका देखिन्छन । उदहारणको लागि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको चुनावी घोषणापत्रमा महिला सम्बधी प्रतिबद्धाहरुलाई यसरी उलेल्ख गरेका छन् । “महिला विरुद्ध विभिन्न क्षेत्रहरुमा हुने गरेका विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्दछ । सरकारको सबै तहमा र निकायहरुमा भएका र हुने नीति निर्माण गर्ने पदहरु र नेतृत्वमा पुरुष सरह महिलाको समान पहुँच र अवसरको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ ।” तर संविधान सभाको चुनावमा घोषणपत्रमा शब्दको जाल ओछ्याएर मधेसी महिलाबाट मत बटुल्लन सफल भएको फोरम नेपालले अवसरको कुरा त परै जाओस पार्टीको आन्तरीक कार्य समितिमा पनि महिलाहरुलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।
मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालको वर्तमान ६२ सदस्यी केन्द्रिय समितिको पार्टी संरचनामा एक जना महिला कोषाध्यक्ष सहित ६ जना मात्रै छन् । यस्तै एक सय ११ सदस्यीय कार्यसमिति रहेको मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकमा पदाधिकारीमा एक महिला महिला मात्रै रहेका छन् भने केन्द्रिय समिति सदस्यमा १२ जनाले स्थान पाएका छन । सद्भावना पार्टीको पदाधिकारीमा महिला नेतृको उपस्तीथि नै छैन भने ९३ सदस्यीय केन्द्रिय समितिमा ११ जना महिला मात्रै रहेका छन । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको पदाधिकारीमा पनि महिला नेतृको उपस्तिथी शुन्य नै छ भने एक सय १५ सदस्यीय केन्द्रिय समितिमा १३ जना महिलाले मात्र स्थान पाएका छन ।
सधै समावेशी समाज निर्माण र असमानता एव भेदभाव अन्त्यको नारा घन्काइरहने मधेसवादी दलहरुले आफनो पार्टीलाई त समावेशी बनाउन नसकेको अवस्थामा मधेसका मुद्दालाई कसरी स्थापित गराउन सक्लान र ? समावेशी समाज निमार्णको मुद्दा यतिबेला मधेश केन्द्रित दलको लागि सत्ता र शक्ति प्राप्तिकोे लागि भजाइ खाने भाँडो मात्रै भएको छ । आफै असमावेशी र असमानुपातिक दलहरुबाट समानता, समावेशी र समानुपातिक कार्यान्यन हुनु कठिन हुने देखिन्छ । र्सवप्रथम राजनितिक दलहरु स्वयम समावेशीहुनु जरुरी छ ।
मधेशी महिलाका लागि आएका अवसरहरुलाई मधेसवादी दलहरुले सदुपयोग गर्न पनि सकेनन । संविधान सभाको समानुपाति सभासद चयन प्रकृयामा आफनो आसेपासे तथा घरका गृहीणीहरु लगेर उनीहरुले जिल्लामा संघर्ष गरीरहेका महिला राजनीतिकर्मीहरुको उपेक्षा गरे । संघिय सदभावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले आफनो श्रीमति डिम्पल झालाई सभासद बनाए । मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले श्रीमति सरिता यादव सभासद बनाए भने तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफनो सम्मधिनी ईन्द्रा झालाई सभासद बनाउन चुकेनन । त्यसैगरी सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आफनो श्रीमती शैल देवीलाई संविधान सभामा सभासद बनाए । सविंधान सभामा मधेसवादी दलका अध्यक्षहरुले पठाएका श्रीमति सभासदहरु स्वविवेक भन्दा श्रीमान विवेकबाट संचालित देखिन्छन ।
मधेश आन्दोलनको राप, तपा र प्रभावले गर्दा मधेश केन्द्रितदलले वि.स २०६४ सालदेखी पहिलो संविधान सभा विगठन हुनु भन्दा पहिले सम्म ५६ वटा मन्त्रालय पाएका थिए । त्यसमा पनि जातिवाद तथा नातावादको कृपा पाएका ९ जना मधेसी महिलाहरु निती निमार्ण गर्ने ठाँउ अर्थात मन्त्रीपरिषदमा पुगे । ती मध्ये रेणु यादव तथा सरिता गरीले पूर्ण मन्त्री थिए भने अन्य ७ राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री थिए । यसरी मन्त्री भएका धेरैजसो राजनीतिक संघर्ष र मधेशको तल्लो तहको राजनीतिबाट उठेका भन्दा पनि शक्तीशाली मान्छेका वरीपरी वर्षौदेखी रहेका महिला नै थिए । जसले गर्दा मधेसी महिलाका अधिकार र पहुंचका विषय निती निर्माणको तहमा स्थापित हुन सकेन । उनीहरुको उपस्थिती संख्यात्मक रुपमा मात्रै सीमित भयो ।
तमलोपाकी केन्द्रिय सदस्य चन्दा चौधरीको बुझाइमा सक्षम र योग्य महिलालाई नेतृत्व र निति निर्माणको तहमा लग्न नखोज्नु, नाम मात्रको सहभागिताका लागि पार्टीको विधान र उदेश्यबारे पनि बोल्न नसक्ने महिलालाई जानाजान स्थान दिने परम्परा मधेसवादी दलहरुमा हावी छ । मधेसी महिला मधेस राजनितिमा प्रभावशाली र बलियो नहुनुको कारण नेतृत्वदायी क्षमताको अभाव र पूरुष राजनितिज्ञ जति महिलामा लगानि नहुनु पनि हो । जसकारण मधेस आन्दोलनलाई भ¥याङ्ग बनाएर राजनितिमा प्रवेश गरेका मधेसी अधिकांश महिला राजनितिककर्मी टुप्पाबाट पलाएका जस्तो छन् । मधेश राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका केन्द्रिय सदस्य नेतृ निलम वर्माले,१५ वर्ष नेपाल सद्भावना पार्टीको महिला सङ्गठनको केन्द्रीय नेतृत्व गरिन तर निति निमार्णको तहमा जाने सवालमा भेदभाव भएको बताउँछिन । वर्माको अनुभवमा प्रत्येक पार्टीमा पूरुषवादी सोचकै कारण मुल्याङ्कन नगरी भेदभाव गरिन्छ ।
मधेसी महिलालाई राजनीतिका उपस्थित गराउनु र उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । जसले गर्दा यिनीहरु राजीतिक रुपमा बलिया भएर नीति निर्माणका तहमा पहँुच कायम गर्न सकुन । मधेसका महिलाहरुलाई मधेसवादी दलले यसरी नै बिभेद गरिरहने हो र अवसरका वेला संघर्ष गरेका भन्दा आसेपासेलाई मात्रै स्थान दिदै जाने हो भने मधेशको मुद्धा मात्रै कमजोर हुदैन, मधेशी महिलामाथीको विभेदको श्रृखलालले पनि निरन्तरता पाउनेछ । (लेखीका : कान्तिपुर टेलिभिजनमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)